I-KANYE WEST IPHAZAMISA UMTSHATO NJENGOTAYLOR SWIFT VMAS: IVIDIYO - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato I-Kanye West iphazamisa intetho kwi-Friend's Wedding njengo-Taylor Swift kwii-VMAs: Ividiyo!
I-Kanye West iphazamisa intetho kwi-Friend's Wedding njengo-Taylor Swift kwii-VMAs: Ividiyo!
U-Kanye West waphazamisa umhlobo wakhe umhlobo ka-David Grutman kunye no-Taylor Swift VMAs wakhe 'u-Imma makakuphele'. Ityala: Imifanekiso kaJohn Parra / GC
Ngu: Kelly Spears 04/25/2016 ngo-12: 36 PM
U-Kanye West udume ngokungaphezulu komculo wakhe onempikiswano; Ubume bakhe bokuthetha buye baba yinto ehlekisayo eqhubekayo kumajelo eendaba, kwaye ukwazile ukuyenza kwakhona! Kwimpelaveki ka-Epreli 23, imvumi edumileyo eneminyaka engama-38 ibhiyozele umtshato wabahlobo bayo, umnini weklabhu yasebusuku uDavid Grutman kunye nemodeli u-Isabela Rangel. Kwindlela yokwenyani ye-Kanye, wayengenakukwazi ukufikelela kusuku lomtshato ngaphandle kokuthatha ithuba lakhe kwindawo ebonakalayo.
Kwimeko apho abahamba emtshatweni babelibele malunga ne-West ngokungamphazamisi uTaylor Swift ngexesha le-MTV yeVidiyo yoMculo ka-2009, wanikela ngesikhumbuzo esingathandekiyo xa wayethatha lo mic kwakhona xa wayethetha nomtshakazi nomyeni. Njengoko iindwendwe zomtshato zazikhwaza, wanikela ngamagama ambalwa anobubele kwesi sibini sisandul 'ukutshata. NdinguMma makugqibe, wakhwaza, kodwa uDave noIsabela babenomnye wemitshato ebalaseleyo kuwo onke amaxesha! Unikezele ngoncumo olucekeceke xa iindwendwe zomtshato ziqhwaba izandla zikhwaza kunye nomtshakazi nomyeni.
Ewe ndicinga ukuba oku kuthetha konke. Ndiyakuthanda @isabelarangela Grutman
Ividiyo ethunyelwe nguDavid Grutman (@davegrutman) nge-23 kaMatshi 2016 ngo-10: 07 pm PDT
I-West yayingenguye kuphela undwendwe olubalulekileyo olwaluza kubonisa umtshato omnandi; Uye weza nenkosikazi yakhe, uKim Kardashian. Usibali wakhe uKourtney naye wayekho. Ezinye iindwendwe ezidumileyo zazibandakanya umdlali weqonga uGabrielle Union, umfuziselo uElle Macphearson, umdlali weqonga uWilmer Valderrama, kunye nomlwi wobungcali uHulk Hogan. Umsasazi kanomathotholo uRyan Seacrest wade wavela nentombi yakhe, umdlali weqonga uHilary Cruz.
Umcwangcisi womsitho uCarolina Toledo uncede uMnu noNkskz. UGrutman bakhuphe umtshato wabo omhlophe. Ngokwenani lezitulo, kubonakala ngathi isibini esonwabileyo asinako ukunqongophala kwabathandekayo, kubandakanya nabahlobo babo abadumileyo.
Iindonga zeWynwood ziguqulwe zanika @isabelarangela kunye @davegrutman ngomzuzu wabo omhlophe womtshato !! #grootwedding #davidandisabela
Ifoto ethunyelwe nguCarolina Toledo (@carotoledo) nge-24 kaMatshi 2016 ngo-8: 58 kwi-PDT
Ngelixa iNtshona ikhetha ukuba ngaphambili nakwiziko, umfazi wakhe wadlala indima yokufota. U-Kardashian, oneminyaka engama-35, uthabathe imifanekiso engamanyala ngeempelaveki zomtshato, kubandakanya nefoto enye ngesandla somyeni esitsha kwibhedi yomtshakazi wakhe.
Ifoto ethunyelwe nguKim Kardashian West (@kimkardashian) nge-23 ka-Epreli 2016 ngo-10: 02 pm PDT
Ngosuku olungaphambi komtshato, uKardashian kunye nabahlobo abalingane bomyeni nomyeni enxibe ezisithoba kwaye babhiyozela iminyaka engama-37 yokuzalwa kukaKourtney. UKim washukumisa ingubo yakhe enganxibanga, eshiya incinci kwingcinga, ngelixa uKourtney wayenxibe ilokhwe emnyama emnyama.
Ngaphandle kwentetho ye-impromptu yaseNtshona kunye nesihlwele sobuso obudumileyo, umtshakazi nomyeni omangalisayo ikwazile ukuzibamba.
Siyavuyisana noMnu noNksk. Grutman omtsha! Ndinqwenela ulonwabo lomtshato ngaphandle kweziphazamiso.
iibhotile zewayini ezenzelwe umtshato
Esona sipho sisesona sisesona sibalaseleyo
yimalini iringi esixhenxe yedayimane
izinto zokwenza amadoda lokuzalwa
amanqaku amnandi othando kuye